PUBG Mobile Royal Pass Season 16 မှာ ထူခြားတဲ့ Rewards တွေရယူလိုက်ပါ | Codashop Blog MM
PUBG Mobile Royal Pass Season 16 မှာ ထူခြားတဲ့ Rewards တွေရယူလိုက်ပါ
Metro Royale Season အသစ်မှာ ရရှိမယ့် ဆုအားလုံး
တော်တော်ကြီးကို စောင့်လိုက်ရတဲ့ PUBG Mobile Royale Pass ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်နဲ့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်း ရောက်ရှိလာပါပြီ။ Metro Exodusနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဒီ season အသစ်က Skin တွေ၊ ၀တ်စုံတွေ နဲ့ တခြား ထင်ရှားတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ၀င်ပြီး item အသစ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Metro-exclusive theme ပါ၀င်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းတို့က တကယ့်မိုက်တဲ့ စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံကို ရရှိသွားမှာပါ ဖြစ်ပါတယ်။
Metro လှိုဏ်ခေါင်းထဲ ၀င်ပါ
ဒီနောက်ဆုံး Season ကို Metro Royale လို့ခေါ်တဲ့ ဂိမ်းပုံစံအသစ်တစ်မျိုးနဲ့ အသားပေးထားပါတယ်။ သင် level မြင့်လာတာနဲ့အမျှ လက်နက်အသစ်တွေ၊ တပ်ဆင်စရာပစ္စည်းတွေနဲ့ လက်နက်သေတ္တာတွေကို သုံးလို့ရမှာပါ။ Black Market လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုင်မှာ Metro Cash ကိုလဲလည်နိုင်ဖို့ itemတွေကို ရောင်းပါ။ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ တခြား item တွေကို ပြိုင်ပွဲမစတင်ခင်မှာ ၀ယ်ယူပါ။ ကစားသမားတွေက သူတို့ရဲ့ Loadout Inventory ကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့ arsenal ကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပါတယ်။
Metro supplies တွေ စုဆောင်းဖို့နဲ့ အဲ့ဒါတွေကို Colonel Miller နဲ့ တခြားအလွန်ကောင်းတဲ့ ဆုတွေရဖို့ လဲလည်ဖို့အတွက် အထူး Metro Events Tab ထဲကို သွားပါ။ ပြီးတော့ သင် Level မြင့်လာတာနဲ့အမျှ ပိုကောင်းလာတဲ့ အလကားရမယ့် ဆုတွေကို စုဆောင်းဖို့ RP ကို မ၀ယ်ခင် group တစ်ခုကို ၀င်ရောက်လိုက်ပါ။
ပိုကောင်းတဲ့ဆုတွေအတွက် level မြှင့်တင်ပါ
ကစားသမားတွေကတော့ ပျော်ရွှင်ရတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။ ပြီး‌တော့သူတို့ ဆုတွေကို နည်းလမ်း2မျိုးနဲ့ ရယူနိုင်တယ်။ Royale Pass နဲ့ Ranked Play (free)တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားတွေက Elite Pass ကို 600UC, Elite Pass Plusကို 1800UC နဲ့ အဆင့်မြှင့်နိုင်တယ်။ 1 ကစပြီး အများဆုံး 100 အထိဖြစ်တဲ့ သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး Elite Royale Pass ဆုတွေကို ရနိုင်ပါတယ်။
ဆုများ Unlockable at
နောက်ဆုံးစကား : ဘာကြောင့် Royale Pass ကိုရယူသင့်တာလဲ?
Royale Pass သည် အောက်ပါအချက်အလက်များကြောင့် ၀ယ်ယူရန် အလွန်တန်တာပါ။
အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် ဂိမ်းထဲက ပစ္စည်းအများဆုံးစုဆောင်းခြင်းကို ကြိုက်သည့် စုဆောင်းသူများက Royale Pass ကို ဝယ်သင့်ပါတယ်။ Inventory ထဲမှာ ပစ္စည်းတွေ ပြည့်နေရင်ကို ပျော်ရွှင်ခြင်းစေပါတယ်။ The Night Terror Outfit ကတော့ အဆင့်အတန်းတစ်ခု ဖော်ပါတာပါဘဲ။ ထို့အပြင် Metro Royale Badge သည်ဂိမ်း Mode အသစ်မှာ အသုံးပြုရန် အသုံး၀င်ပါတယ်။ အလွန်မိုက်တဲ့ Item တွေအပြည့်နဲ့ အခြား Gears တွေကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ Items တွေ စုဆောင်းဖို့ အတွက် ဒါတွေမငြင်းသင့်ပါဘူးနော်။
နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ Royale Pass ကိုသင်ရယူပြီးပြီလား?
ယခုအချိန်ထိ သင်အကြိုက်ဆုံးဆုက ဘာလဲ။ သင်၏ PUBG Mobile ကို Codashop တွင်သာငွေဖြည့်ရန် မမေ့ပါနဲ့နော်။ Login (သို့မဟုတ်) စကားဝှက် မလိုအပ်ဘဲ ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleWave Money x Midasbuy 20% Cashback အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန် သိထားသင့်သော စည်းကမ်းချက်များ
Next articleFree Fire Hero Spotlight: Hayato, ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ဆာမူရိုင်းကြီး